Hollywood Bollywood | Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more - Part 5
३६ लागिन् करीना, जान्नुहोस् चाखलाग्दो डेब्यु प्रसंग
Gufgaf.com / ३६ लागिन् करीना, जान्नुहोस् चाखलाग्दो डेब्यु प्रसंग - बलिवुडकी अभिनेत्री करीना कपूर सेप्टेम्बर २१ देखि ३६ वर्ष लागेकी छिन् । अहिले चर्चित बलिवुड सेलिब्रेटी..
काठमाण्डौ /असोज ०२ – खुलेआम प्रेम गर्ने अभिनेत्रीमा पर्छिन् ईलियाना डिकु्रज । उनले हालै मात्र सामाजिक सञ्जालमा एक तस्बिर सेयर गरेकी छिन् । उक्त तस्बिरमा उनले प्रेमी एं..
संजयको ‘भूमि’मा सेंसरले लगायो कैची
अभिनेता संजय दत्तको आगामी सिनेमा ‘भूमि’मा सेंसर बोर्डले कंैची लगाएको छ । जानकारी अनुसार सिनेमामा अदिती राव हैदरी बलात्कार भएको सिनमा सेंसरले आपत्ति जनाउदै कैंची चलाएको ..
सिद्धार्थसँग ब्रेकअप पछि पूर्व प्रेमीसँग आलिया
सिद्धार्थ मल्होत्रासँग ब्रेकअप भएको खबरपछि अभिनेत्री आलिया भट्ट पूर्व प्रेमीसँग देखिएकी छिन् । आलिया पूर्व प्रेमी अलि दादरकरसँग साथीको पार्टीमा पुगेकी थिईन् । यो तस्बि..
प्रियंकाले सिक्किम सरकारसँग मागिन् माफी !
अभिनेत्री प्रियंका चोपडा हालै दिएको एक अभिब्यक्तिका कारण विवादमा मुछिईन् । भारतको सिक्किम राज्यलाई उग्रवाद राज्य भनेपछि उनी विवादमा परेकी हुन् । केही दिन अघि मात्रै टो..
टुट्यो कपिलको विवाह तर किन ?
कपिल शर्माले प्रेमिका भवनित चतरथ उर्फ गिन्नीसँग विवाह तोडिदिएको खबर छ । कपिल शर्माकी टिमकी पूर्व सदस्यका कारण यस्तो भएको बताईएको छ जो कपिललाई एकोहोरो माया गर्छिन् । कप..
नेपाली नबुझेपछि प्रियंकाले लिईन् अंग्रेजीको सहयोग
अभिनेत्री प्रियंका चोपडा अहिले हलिवुड टि भि सिरिज क्वान्टिको सिजन ३ र हलिवुडकै एक सिनेमामा व्यस्त छिन् । बलिवुडमा उनी सिनेमा बाजीराव मस्तानी पछि देखिएकी छैनन् । तर आफ्नो प्रोडक्शनमार्फत सिनेमा निर्माण गर्ने तयारीमा छिन् । अभिनयसँगै सिनेमा निर्माणमा जुटेकी प्रियंकाको नेपाली भाषामा निर्माण भएको सिनेमा ‘पाहुना’को टोरन्टो फिल्म फेस्..
अहिले सिनेमाको लागि पहिले नै रिलिज मिती तय गर्ने ट्रेण्ड चलिरहेको छ । तर अजयले भने यो ट्रेण्डलाई परिवर्तन गर्ने सोच बनाएका छन् । उनका अनुसार सिनेमाको रिलिज मिती पहिले नै तय गरिँदा तोकिएको समयमा सिनेमाको काम सक्नुपर्ने दबाव हुन्छ । यसले सिनेमाको काममा असर पर्छ । अजय यतिबेला ६ वटा सिनेमाको निर्माणमा जुटेका छन् […]
६ वर्ष ब्वाईफ्रेण्डसँग ७ वर्ष श्रीमानसँग बसेकी महिमा अहिले एक्लै
अभिनेत्री महिमा चौधरी १० सेप्टेम्बर देखि ४४ वर्ष लागेकी छिन् । दार्जिलिङमा जन्मेकी महिमाले कलाकारिताको शुरुवात बिज्ञापनबाट गरेकी हुन् । शुरुवातमा केही बिज्ञापनमा काम गरेर उनले सिनेमाको यात्रा तय गरेकी थिईन् । बिज्ञापनमा काम गर्ने क्रममा निर्माता सुभाष घईको नजर उनमा पर्यो । सुभाषले महिमालाई मुख्य अभिनेत्रीको रुपमा सिनेमा ‘परदेश’..
महंगो ड्रेसका कारण चर्चामा कंगना
अभिनेत्री कंगना रनावत यतिबेला चर्चामा छिन् । कहिले ऋतिक रोशनसँगको सम्बन्ध त कहिले आदित्य पंचोलीसँगको सम्बन्धका कारण उनी चर्चामा छिन् । यसका साथै कंगनालाई यतिबेला एउटा ड्रेसले चर्चामा ल्याएको छ । कंगनाले हालै मात्र डिजाईनर बिभु मोहापात्राको डिजाईन रहेको ओटम विंटर २०१७ कलेक्शनको ड्रेस लगाईन् । महंगो ड्रेसका कारण कंगना चर्चामा आएको..
पहिलो पटक मजदुर बन्दै वरुण, दीपिका र ईरफानको फिल्ममा भेटिएनन् अभिनेता–बलिवुड अपडेट
वरुण धवनको दोहोरो भूमिका रहेको सिनेमा जुडुवा २ यहि सेप्टेम्बर २९ मा रिलिज हुँदैछ । यो सिनेमापछि वरुण सिनेमा ‘सुई’को काममा जुट्नेछन् । यस सिनेमामा उनी अभिनेत्री अनुश्का शर्माको अपोजिट हुनेछन् । यस सिनेमामा वरुण धवन एक मजदुरको भूमिकामा रहने खुलासा भएको छ । यस सिनेमा मार्फत वरुण पहिलो पटक मजदुरको भूमिकामा देखिँदैछन् । सिनेमालाई [&h..
५० लागे अक्षय, आफ्नै विद्यार्थीका कारण भयो सिनेमामा प्रवेश
बलिवुड अभिनेता अक्षय कुमारले बलिवुड सिनेमा उद्योगमा २५ वर्ष बिताएका छन् भने जीवनका ५० औँ बसन्त पार गरिसकेका छन् । १९६५ मा अमृतसरमा जन्मेका अक्षय कुमारले ९ सेप्टेम्बरमा ५० औँ जन्मदिन मनाए । वास्तविक नाम राजिव भाटिया भएका अक्षयले ५० वर्षे जीवन यात्रा र २५ वर्षे सिने करिअरमा १ सय २५ भन्दा धेरै सिनेमामा काम […]
श्रद्धा कपूरको मुख्य भूमिका रहेको सिनेमा ‘हसीना पारकर’ २२ सेप्टेम्बरमा रिलिज हुँदैछ । यतिबेला उनलाई सिनेमाको काम भ्याई नभ्याई छ । एकातिर सिनेमा ‘हसीना पारकर’को प्रमोशनमा हिड्नुछ भने अर्कोतिर सिनेमा ‘साहो’ र ‘साईना नेहवाल’को बायोपिकको तयारी । यतिबेला उनी यी सबै कामलाई सन्तुलीत तरिकाले अगाडि बढाउने कोशिसमा छन् । श्रद्धालाई ‘साहो’क..
डान्स सिक्दासिक्दै जीवनसाथी, यसरी भयो राधिका आप्टेको विवाह
अभिनेत्री राधिका आप्टे ७ सेप्टेम्बर देखि ३२ वर्ष लागेकी छिन् । सन् १९८५ सेप्टेम्बर ७ मा तमिलनाडुमा जन्मेकी राधिकाले करिअरको सुरुवाता थियटरबाट गरेकी थिईन् । राधिका दक्षिण भारतीय सिनेमा उद्योगकी सफल अभिनेत्रीको सूचिमा पर्छिन् । त्यस्तै उनले केही बलिवुड सिनेमामा पनि अभिनय गरेकी छिन् । थियटरमा काम गर्दा गर्दै उनले सन् २००५ मा बलिवुड..
वरुण धवन, ज्याक्लिन फर्नान्डिज, तापसी पन्नुको मुख्य भूमिका रहेको सिनेमा ‘जुडुवा २’ सेप्टेम्बर २९ मा रिलिज हुँदैछ । सन् १९९७ मा सलमान खानको मुख्य भूमिका रहेको सिनेमा ‘जुडुवा’ को सिक्वेल ‘जुडुवा २’ हेर्नको लागि दर्शकहरु पनि आतुर भएका छन् । यहि मौकामा सिनेमाका मुख्य कलाकार वरुण धवनसँग एजेन्सीले गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै हामीले य..